Vokatry ny fandotoana ny rano | Green Renewable
Portillo Alemanina | 27/04/2022 12:00 | Tontolo_iainana
Ny planeta dia mampahatsiahy antsika matetika fa tsy misy fiainana tsy misy rano, toy ny fitomboan'ny hain-tany izay manohintohina ny famatsiana rano fisotro any amin'ny faritra samihafa amin'ny tany. Ny karazana fandotoana rano isan-karazany dia mahatonga ny kalitaon'ity loharanon-karena sarobidy ity hiharatsy, izay mampiseho loza mitatao amin'ny fahasalaman'ny planeta. Indrisy anefa, noho ny asan'ny olombelona dia teny roa mifandray akaiky ny rano sy ny loto. Betsaka ny olona tsy mahafantatra tsara ny momba ny Vokatry ny fandotoana ny rano.
Noho izany antony izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny voka-dratsin'ny fahalotoan'ny rano sy ny karazany.
1.2 Tambonin'ny rano
1.3 oksizenina absorber
1.6 Fandotoana zavatra mihantona
1.8 Fandotoana otrikaina
2 Vokatry ny fahalotoan'ny rano
3 Vokatry ny fahalotoan’ny rano any an-dranomasina
4 Ahoana no hisorohana ny vokatry ny fandotoana ny rano
Ny fiparitahan'ny solika dia saika misy fiantraikany amin'ny bibidia eo an-toerana na ny zavamananaina anaty rano, saingy lehibe ny mety hiparitaka.
Miraikitra amin’ny volon’ny voron-dranomasina ny menaka, izay mametra ny fahafahany milomano na manidina ary mamono trondro. Niteraka fandotoana an-dranomasina ny fiakaran’ny solika sy ny fiparitahan’ny ranomasina. Zava-dehibe: Ny menaka dia tsy mety levona anaty rano ary hamorona sosona menaka matevina ao anaty rano, manempotra trondro ary manakana ny hazavana avy amin'ny zavamaniry anaty rano misy fotosintetika.
Ny rano ambonin'ny tany dia ahitana rano voajanahary hita eny ambonin'ny tany, toy ny renirano, farihy, dobo ary ranomasina. Ireo akora ireo dia mifandray amin'ny rano ary levona na mifangaro ara-batana.
Misy mikraoba ao anaty rano. Anisan'izany ny zavamananaina aerobic sy anaerobic. Matetika ny rano dia misy zavamiaina bitika, na aerôbika na anaerobika, miankina amin'ny zavatra azo simbaina mihantona ao anaty rano.
Ny mikraoba be loatra dia mandany sy mandany oksizenina, mitarika amin'ny fahafatesan'ny zavamananaina aerôbika sy ny famokarana poizina manimba toy ny amoniaka sy solifara.
Ny ranon'orana dia manala ny pesticides sy ny akora simika mifandraika amin'ny tany ary mitroka azy ireo ao anaty tany, mandoto ny rano ambanin'ny tany.
Any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, ny olona dia misotro mivantana avy amin’ny renirano, na renirano, na loharano hafa. indraindray mitranga fandotoana voajanahary ateraky ny zavamiaina bitika toy ny viriosy, bakteria ary protozoa.
Io fandotoana voajanahary io dia mety hiteraka aretina mafy amin'ny olombelona sy fahafatesan'ny trondro sy karazana hafa.
Fandotoana zavatra mihantona
Tsy ny zavatra simika rehetra no mora levona anaty rano. Antsoina hoe “particles” ireo. Ireo karazana akora ireo dia mety hanimba na hamono ny zavamananaina anaty rano mihitsy aza.
Fantatra tsara ny fomba fampiasan’ny indostria isan-karazany ireo akora simika ariana mivantana any amin’ny loharanon-drano. Agrochemicals ampiasaina amin'ny fambolena mba hifehezana ny bibikely sy ny aretina miafara any anaty renirano izy ireo, manapoizina ny zavamananaina anaty rano, manimba ny zavamananaina ary mampidi-doza ny ain'olombelona.
Imbetsaka isika no milaza fa ny rano dia manana otrikaina mahasalama ho an'ny fiainana, ka tsy ilaina ny manadio azy. Saingy nanova ny sary manontolo ny fitadiavana zezika fambolena sy indostrialy be dia be ao anaty rano fisotro.
Ny rano maloto sy ny zezika ary ny maloto dia misy otrikaina be dia be izay afaka mampiroborobo ny ahidrano sy ny tsimparifary ao anaty rano, ka mahatonga azy tsy hosotroina, ary na dia ny sivana aza.
Fandotoana ny zezika avy amin'ny tany fambolena rano avy amin’ny renirano sy renirano ary farihy hatrany amin’ny ranomasina. Ny zezika dia manan-karena amin'ny otrikaina isan-karazany ilaina amin'ny fiainan'ny zavamaniry, ary ny ranomamy aterak'izany dia manimba ny fifandanjana voajanahary amin'ny otrikaina ilaina ho an'ny zavamaniry anaty rano.
Ny rano dia voaloto amin'ny fanafody izay arianay ao amin'ny trano fidiovana na ny menaka izay arotsaka ao amin'ny lavadrano. Ohatra hafa ny fako ariana any an-dranomasina sy ny renirano. Toy izany koa no mitranga amin'ny microplastics, izay mitombo haingana ny fifantohana ao an-dranomasina. Araka ny filazan'ny Firenena Mikambana, plastika 8 tapitrisa no miafara any an-dranomasina isan-taona, ka manova ny fiainan'ny tontolo iainana monina ao.
Raha ny marina, io fikambanana iraisam-pirenena io dia mamaritra ny fandotoana ny rano ho fandotoana ny rano izay miova ny firafiny mandra-pahatongan'ny tsy azo ampiasaina. Ny rano maloto dia midika fa tsy afaka mampiasa io harena sarobidy io ny olombelona. Ity fahasimbana ity dia maneho loza mitatao ho an'ny planeta ary vao mainka hampitombo ny fahantran'ny tena marefo.
Ny fandotoana ny rano dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny planeta. Ny sasany amin'ireo vokatra lehibe indrindra amin'ny karazana fahalotoan'ny rano dia: fanimbana ny zavamananaina, fandotoana ny rojo sakafo, anisan'izany ny fiparitahan'ny akora misy poizina amin'ny sakafo sy ny tsy fahampian'ny rano fisotro.
Mamatsy ny 80%-n'ny mponina eran-tany ny tahirin-drano. Ny 4% amin'ireo tahiry ireo dia voaloto. Amin'ireo karazana fandotoana rano rehetra, ny lehibe indrindra dia mifandray amin'ny asa indostrialy taorian'ny Ady Lehibe II ary mandraka androany. Ohatra, isan-taona dia mihoatra ny 450 kilaometatra toratelo ny rano maloto ariana any an-dranomasina. Mba hanalefahana izany loto izany, dia nisy rano madio 6.000 XNUMX kilaometatra toratelo fanampiny nampiasaina.
Araka ny filazan’ny Firenena Mikambana, maloto 2 tapitrisa taonina no mikoriana ao amin’ny rano maneran-tany isan’andro. Ny loharanon'ny loto lehibe indrindra dia ny tsy fahampian'ny fitantanana sy ny fanariana fako olombelona, ​​indostria ary fambolena.
Ny ranon-javatra sasany dia afaka mandoto faritra midadasika amin'ny rano amin'ny fifantohana ambany. Ohatra, Ny lasantsy 4 litatra monja dia afaka mandoto rano hatramin'ny 2,8 tapitrisa litatra. Ny biby an-dranomamy dia ho lany tamingana avo dimy heny noho ny biby an-tanety.
Vokatry ny fahalotoan’ny rano any an-dranomasina
Ny faritra an-dranomasina maloto indrindra dia ny Ranomasina Mediterane. Ny morontsirak'i Frantsa, Espaina ary Italia dia anisan'ny faritra maloto indrindra eto an-tany. Manaraka eo amin'ny lisitra ny Karaiba, Celtic ary Ranomasina Avaratra. antony? Fako an-dranomasina, iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny fandotoana ny ranomasina. Maherin'ny 60% ny fako tonga dia plastika. 6,4 tapitrisa taonina ny plastika Mifarana any an-dranomasina isan-taona izy ireo.
Raha tsy tia ny planetantsika isika ary mandray fepetra hanafoanana ny fandotoana ny rano, dia mety handalo ireo mpiara-dia amintsika ny ranomasina amin'ny fanalefahana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fahavalontsika. Ireo rano be dia be ireo dia toy ny filentika voajanahary ho an'ny gazy karbonika ao amin'ny atmosfera. Izany dia ahafahana mampihena ny entona mandatsa-dranomaso sy ny voka-dratsy ateraky ny krizin'ny toetr'andro.
Amin'izao fotoana izao, mampitandrina antsika ny mpahay siansa sy ny manam-pahaizana maneran-tany fa raha tsy manova ny fahazarantsika isika ary mijanona amin'ny famoahana an'io gazy maloto io, dia tsy ho velona ny fiainana any an-dranomasina noho ny fiakaran'ny mari-pana, ary izany no antony iray hafa tokony horaisina. kaonty.
Amin'ny lafiny iray, olana hafa tsy maintsy atrehintsika ny tsy fahampian-drano sy ny fihenjanana hydric. Araka ny tombantomban’ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana Momba ny Tontolo Iainana, amin’ny 2025, ny antsasaky ny mponin’ny planeta dia hiatrika tsy fahampian’io harena sarobidy io. Ny rano maloto rehetra indray mitete anio dia midika ho rano very rahampitso.
Ahoana no hisorohana ny vokatry ny fandotoana ny rano
Eo am-pelatanantsika ny fisorohana ny fandotoana rano. Ireto ny sasany amin'ireo zavatra azontsika atao mba hanafoanana ny fisian'ny loto ao anaty rano:
Mampihena ny famoahana gazy karbonika
Esory ny fampiasana pesticides sy karazana simika hafa izay manohintohina ny natiorantsika
Aza manondraka ny voly amin'ny rano maloto
Fampiroboroboana ny jono maharitra
Esory ny plastika tokana ampiasaina
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny vokatry ny fandotoana ny rano ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Vokatry ny fahalotoan'ny rano